8 talo si aad uga ilaaliso taleefankaaga Android khataraha internetka | Androidsis
Miguel Gaton | | Amniga
Dhamaan ma ka warqabtaa xogta iyo macluumaadka gaarka ah ee aad ku keydiso taleefankaaga gacanta? Sawirro, fiidiyowyo, taariikhda daalacashada internetka, farriimaha, iyo xitaa furaha sirta ah! Taleefankaagu waa badeecad aad u qaali ah oo loogu talo galay tuugada iyo jabsadayaasha. Laakiin ha ka welwelin! Nasiib wanaagse, qaar baa jira waxyaabaha aad sameyn karto si aad u ilaaliso xogtaada hanjabaadaha internetka. Fiiro u yeelo maxaa yeelay hoosta waxaan ku siin doonaa 8 talooyin oo aad waxtar u leh si aad telefoonkaaga Android u ilaaliso. Diyaarsaday? Aan tagno halkaas!
1 1. Samee eray sir ah oo aad u xoog badan
2 2. Adeegso VPN
3 3. Cusbooneysii nidaamkaaga hawlgalka ee mobilada
4 4. Iska jir inaad soo degsato codsiyada
5 5. La soco rukhsadaha aad siiso codsiyada
6 6. Ku rakib antivirus mobilkaaga
7 7. Qarsoodi telefoonkaaga gacanta
8 8. U isticmaal kaliya Google Play dukaanka soo dejinta
1. Samee eray sir ah oo aad u xoog badan
Sow ka tegi maysid albaabka gurigaaga oo furan adigoo halista u ah qof walba inuu soo galo? Hagaag taasi waa sida saxda ah ee aad ku sameyn laheyd moobilkaaga hadaadan dhigin furaha sirta ah. Talooyinkeyga ugu horeeya waa inaan dhigo lakabka koowaad ee amniga taleefankaaga Android adoo dejinaya PIN ama lambarka sirta halkii aad kaheli laheyd qaabka is riix riixaya, taas oo ka fudud in la jabiyo.
2. Adeegso VPN
Una VPN loogu talagalay Android waxay ka fogaan kartaa haakariska iyo weerarada madax furashada. VPNka ilaali asturnaantaada dhigista tunnel u dhexeeya taleefankaaga iyo internetka. Sidan oo kale, waxqabad kasta oo aad ka fuliso meel fagaare ah ama ka furan Wi-Fi taleefankaaga waa la ilaalin doonaa.
3. Cusbooneysii nidaamkaaga hawlgalka ee mobilada
Cusbooneysiinta ayaa la socota waxyaabo cusub oo loogu talagalay taleefankaaga, laakiin sidoo kale leh hagaajinta amniga. Tani waa sababta aadan ugu oggolaan karin taleefankaagu inuu noqdo mid waqtigiisu dhacay.
4. Iska jir inaad soo degsato codsiyada
Talada xigta waa in la bixiyo fiiro gaar ah u yeelo codsiyada aad ku rakibto taleefankaaga. Taasi waa halka ugu badan furin taasi waxay saameysaa taleefannada gacanta. Sidaa darteed, waxaan kugula talinayaa 3 arrimood:
Ku rakib kaliya codsiyada aad runtii u baahan tahay
se ogaanshaha rukhsadaha Maxaad siisaa marka aad arji ku rakibto mobilkaaga?
Ku rakib barnaamijyadooda kaliya Google Play, dukaanka rasmiga ah ee loogu talagalay barnaamijka Android.
5. La soco rukhsadaha aad siiso codsiyada
Horay ayaan horey ugu soo sheegay mowduucan, laakiin waxaan u maleynayaa inay aad muhiim u tahay oo aan doonayey inaan siiyo qodob gaar ah. Mararka qaar kama war qabno xogta gaarka ah ee aan wareejineyno sida ku xusan codsiyada kaliya ee loogu talagalay xaqiiqda ah in lagu rakibo qalabkeena.
Mararka qaar codsiyada aan waligeen xitaa isticmaalno ama aan isticmaalno kaliya mararka qaarkood waxay marin u leeyihiin sawiradeena iyo fiidiyowyadeenna. Ka warqabida tani waa lagama maarmaan. Haddii aadan rabin inaad ku wareejiso inaad macluumaadkaaga gaarka ah u siiso shirkadaha lacag la'aan, waxa ugu fiican ayaa ah taas hubi rukhsaddaha ku shaqeeya taleefankaaga Android barnaamijyada aad rakibtay.
Taas waxaad u baahan tahay inaad tagto qaybta / ogeysiisyada Codsiga / rukhsadaha Codsiga. Waxaad arki doontaa liis ay kujiraan codsiyada iyo rukhsadaha ay haystaan ​​waadna awoodi doontaa inaad wax ka beddesho.
6. Ku rakib antivirus mobilkaaga
Waxaa jira qaar ka mid ah codsiyada amniga sida antivirus mobile taasi waxay kuu ogolaaneysaa inaad dhigto lakab amaan oo dheeri ah mobilkaaga si aad uga ilaaliso khayaanada iyo been abuurka. Dabcan, iska hubi in fayraska antivirus-ka ee aad rakibaysaa uu amaan yahay kana imaado shirkad lagu kalsoon yahay. Daawadu kama xumaanayso cudurka.
Waxa kale oo jira codsiyo amni oo kuu oggolaanaya inaad ka dhex gasho moobilkaaga haddii ay dhacdo xatooyo ama khasaaro si aad u kaydiso xogtaada oo aad xitaa u hesho meesha ay ku taal
7. Qarsoodi telefoonkaaga gacanta
Maalmahan aad ayey caan u tahay in taleefannadu la yimaadaan qaab lagu dhejiyo sirta. Iyadoo loo marayo nidaamka sirta wixii la qabtay ayaa ah xogta taleefanka u rog xog gabi ahaanba aan la akhriyi karin si sirtaadu u damaanad qaado.
Waa inaad dejiso erayga sirta ah waana inaad aad uga taxaddartaa tan maadaama xaalado badan xaqiiqda gelitaanka lambarka sirta si khaldan dhowr jeer ay keento in si toos ah loo tirtiro dhammaan xogta aad ku haysato taleefankaaga.
Marka tan la eego, taladayda ayaa ah inaad sameyso keyd.
8. U isticmaal kaliya Google Play dukaanka soo dejinta
Hore ayaan uga hadalnay tan, laakiin qodobkaan sidoo kale aad ayuu muhiim u yahay oo wuxuu mudan yahay inuu noqdo qodob muhiim ah. Waan kugula talinayaa kala soo bax barnaamijyada kaliya Google Play Maaddaama laga soo dajinayo codsiyada bogagga aan la garanayn ama kuwa dibedda ah ay khatar gelin karto amniga qalabkaaga.
Nuglaanshaha ayaa si joogto ah looga helaa taleefannada gacanta oo u nugleeya in la weeraro, markaa waa muhiim in laga feejignaado wararka oo taleefankaaga loo ilaaliyo sida ugu macquulsan.
Sidee tahay dammaanad qaadaya amniga mobiladaada? Ma isticmaashaa mid ka mid ah xulashooyinka ku jira talooyinkii hore?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Amniga » 8 talo si aad uga ilaaliso taleefankaaga Android halista internetka
MMORPG Mugdi iyo Iftiin ayaa ku soo socda taleefannada gacanta, diiwaangelin hore ayaa furan
Sida loo rakibo xarunta xakamaynta MIUI 12 taleefoonada kale ee aan ahayn Xiaomi